Ezona ntlanzi ziyingozi neziyingozi emhlabeni Ngeentlanzi
Eyona ntlanzi inetyhefu emhlabeni
Indalo izele ziintlobo ezingapheliyo, nganye nganye yahlukile. Uninzi uninzi alunabungozi ebantwini, kwelinye icala, zikhona ezinye ezinokuba yingozi. Uninzi lwazo lufumaneka kwimilambo yethu, kumachibi nakwiilwandle. Kule mihla, kukho iintlanzi ezinetyhefu.
Okulandelayo, sinika iinkcukacha zeziphi ezi zilwanyana zincinci zinembeko engako, kunye nendawo yazo yokuhlala, iimpawu, amasiko, njl. Ngale ndlela baya kuba nakho ukwahlula phakathi kwabo ukuba banethamsanqa, okanye ngelishwa, ukubalekela komnye wabo.
1 I-Zebrasoma yotyando lweentlanzi
2 Intlanzi yeFugu
3 Iintlanzi zamatye
4 Intlanzi yeengonyama
5 Iintlanzi ze-Scorpion
I-Zebrasoma yotyando lweentlanzi
El I-Zebrasoma surgeonfish (iZebrasoma flavescens), Yeyona ntlanzi intle kakhulu ekhoyo kwaye ihlala kubude nakububanzi boLwandlekazi iPasifiki, ithandwa kwiindawo ezinje ngeHawaii, Japan, Micronesia, iziQithi zeMariana, iiPhilippines kunye neTaiwan.
Ubume bayo buqheleke kakhulu, kuba iyafana kakhulu notolo okanye i-blade yezembe. Umzimba walesi silwanyana sincinci ucinezelwe emacaleni, amaphiko asemqolo kunye nasemaphandleni alinganayo. Ikwanomxinwa kwaye mncinci kakhulu ujongeka njengomlomo.
Uphawu olubalulekileyo kwezi ntlanzi, njengazo zonke iintlanzi zoogqirha, lukhona Iintsiba zayo ezimbini ezinokususwa zibekwe kumacala omabini omsila kwaye asebenza njengesixhobo sokuzikhusela. Ihlala ikakhulu kwiingqaqa zekorale apho ubukhulu becala itya khona.
Nangona iyatyiwa, kuya kufuneka ulumke kakhulu kuba ukutya kwayo kunokubangela ityhefu 'icuuera', ezinokuthi zikhokelele ekubeni ndindisholo kobuso, ukuhlaba, i-hypotension, kunye nokubetha kwentliziyo kancinci.
El Iintlanzi zefugu Yeyosapho lwento ekuthiwa yi-puffer fish. Imile ngokuba nomzimba omhlophe onamabala amnyama, intloko enkulu kunye namehlo adumileyo. Ayinkulu, nangona kuye kwakho iimeko zabantu abathile eziye zafikelela kwimitha enye ubude.
Iyaziwa kakhulu eJapan, kuba ingoyena mntu uphambili kwelinye lamaqhekeza okupheka kwelizwe laseJapan. Kodwa lumka, kuya kufuneka unike ingqalelo ekhethekileyo kule ntlanzi kungekuphela kwincasa yayo, kodwa nangenxa yetyhefu yayo eyomeleleyo.
Zombini isibindi, amehlo kwaye, kwimeko yabasetyhini, ii-ovari zilayishwa ngetyhefu eyomeleleyo ebizwa ngokuba 'tetrodotoxin', Iyakwazi ukubangela ukufa kwiiyure nje ezi-6 emva kokutya. Kufuneka kuqatshelwe ukuba akukho luthintelo lwaziwayo namhlanje.
El iintlanzi zamatye Kuqhelekile kumanzi akweleenjiko ahlamba iilwandlekazi zaseIndiya kunye nePasifiki, ngakumbi ngakumbi kwiindawo zase-Australia naseMalay Archipelago.
Ekuboneni kuqala, kwaye ukuba asiyeki ukuyijonga, kunokubonakala ngathi sijonge ilitye elincinci, kuba umzimba wayo uthathe le morphology ukuze uyile indlela efanelekileyo yokufihla. Esi sizathu segama lale ntlobo.
Kwiimiphetho zazo, ezibonakala ngathi zenziwe luhlobo oluthile lweespiki, kukho iintlobo ezincinci ezinazo amadlala anetyhefu enamandla kunye neyingozi.
Le tyhefu yenziwe cytotoxins kunye neeurotoxins Zibangela iintlungu eziqatha ezifikelela kwinqanaba eliphezulu kwiyure enye emva kokulunywa. Iziphumo ekufuneka zongezwa kule ntlungu zezi: intloko ebuhlungu, isicaphucaphu nokugabha, ukudumba kwamathumbu, ukuxhuzula, ukungeniswa kwi-coma, ukubanjwa kwentliziyo, ukukhubazeka kwamaqela emisipha kwaye, kwiimeko ezimbi kakhulu, kukufa.
Kodwa indawo yokugcina iintlanzi ayipheleli apho. Ikwanayo amadlala anjenge-tuber loo nto ikhupha ityhefu.
El Intlanzi yeengonyama, ekwabizwa ngempazamo njenge ntlanzi yoonomadudwane, iseke indawo yayo yokuhlala e Iagoon (amachibi aselunxwemeni) kunye neengqaqa zekorale zoLwandlekazi lwaseIndiya kunye nePasifiki. Ngolwazi oluthe kratya, olu hlobo lufunyenwe eMpuma Afrika, mpuma mpuma Japan, Australia, Kermadec, njl.
Iyabetha kakhulu ngenxa yemivumbo ekwimiphetho yayo yamaphecana kunye neempondo zayo ezide. Azinazicwili phakathi kwemitha okanye imiqolo yamaphiko azo emqolo.
Ayizizo iintlanzi ezisetyenziselwa ukuhlala nabanye abantu, kodwa zizilwanyana ezizimeleyo nezizolileyo. Ngexesha lasemini bayazimela kwiindawo ezifana nemingxunya kunye naphantsi kwamatye, ngelixa ebusuku bazinikele ekubambeni ixhoba labo: i-shrimp, oononkala kunye nentlanzi engaqhelekanga incinci kunabo.
Bazingela kwiindawo zabo zokufihla, bebeka iintloko zabo kubo belinde isidlo esinokubakho ukuba sidlule phambi kwabo. Bahlasela ngetyhefu kwi amadlala kwimitha yomphetho wayo wangaphakathi kunye nempundu.
Ukulunywa kwesi silwanyana kunokubangela amanxeba abuhlungu, ngelixa ityhefu eyitofa rhoqo ikhokelela kumkhuhlane, ukungasebenzi kwegazi emzimbeni, kunye nokukhubazeka kwemiphunga.
Njengoko besitshilo ngaphambilana, i ingonyama kunye ne-scorpionfish Zizilwanyana ezibini ezifanayo ngenxa yokubonakala kwazo nokubonakala kwazo. Imeko ebangele ukuba badideke, kwaye kwiimeko ezininzi baphathwe ngokungathi basisilwanyana esinye. Into engekhoyo. Isizathu sokufana kwabo kukuba bobabini bangabosapho olunye, ngokomyalelo ka Iscorpaeniformes.
Iintlanzi ze-Scorpion zihlala emanzini ashushu kunye namaqondo okushisa. Kukho iimeko zeentlobo eziye zasasazeka kumanzi amatsha, kodwa zinqabile kwaye zinqabile iimeko. Ixesha labo balichitha emazantsi olwandle, apho bahlala bezingela ii-crustaceans kunye neentlanzi, ezenza intsika ephambili yokutya kwabo.
Umzimba wezi ntlanzi ucinezelwe, kwaye entloko zinemiqolo kunye neentsika. Njengomgaqo ngokubanzi, banonye kuphela Umva wokugqibela leyo, ecaleni kwempiko yamanqatha kunye namaphiko e-pelvic, ihlala amadlala anetyhefu.
Nangona ityhefu yabo yenye yezona zinamandla ezikhoyo, ezi ntlanzi zisetyenziselwa ukuzalisa ekuthinjweni njengezilwanyana zasemanzini, kuba zilungelelanisa ngokukhawuleza nendlela yokuphila engaphandle kwendawo yokuhlala yendalo kwaye ukubonakala kwazo kuzenza zibe zizidalwa ezinomtsalane. Eyona ngxaki inkulu: ukondlaKuba ezi ntlanzi zingamarhamncwa kwaye zifuna ukuzingela amaxhoba, into ekungekho lula ukuyiphumeza ukuba igcinwe kwiitanki zentlanzi nasemachibini.
Njengoko sele ubonile, ayizizo kuphela izilwanyana ezinkulu ezibeka ingozi enkulu. Into enothando ekuboneni nje njengentlanzi inokubonakala ngathi, izisa iingxaki ezinkulu ukuba sinethamsanqa elibi lokungazazi iimpawu zalo kwileta.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Eyona ntlanzi inetyhefu emhlabeni